AMISOM oo si layaab leh uga hadashay askari ka tirsan ciidankooda oo baaritaan lagu sameynayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
AMISOM oo si layaab leh uga hadashay askari ka tirsan ciidankooda oo baaritaan lagu sameynayo
Taliska AMISOM ayaa si layaab leh uga hadashay sawir si weyn u qabsaday baraha bulshada Soomaalida oo ku saabsanaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo baaraya askari kale oo ka tirsan ciidanka AMISOM.
War-qoraal oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ay leeyihiin AMISOM ayaa lagu bogaadiyay taxadarka iyo dadaalka dheeraadka ah ay muujinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Askarigaan ka tirsan AMISOM ayaa la sheegayaa in xilliga baaritaanka lagu sameeynayay uu doonayay inuu ka qeyb qaato sugidda amniga goobtii ay ka socotay dhaarinta xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Sawirkaan lasoo dhigay baraha bulshada ayaa noqday mid ciidanka booliska Soomaaliyeed si weyn loogu ammaanay sida taxadarka leh iyo howsha hufan ay u gudanayaan.
Ciidankaasi ka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa qeyb ka ahaa ciidankii sugayay ammaanka goobtii ay ka socotay dhaarta xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka, waxayna tani marqaati ka noqonaysaa in ciidanka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo kaliya dhiiri-gelin.